सलमानको ‘अन्तिम’ लाई कति तिरेर नेपाल ल्याइयो ? → Chitwan Media Online
सलमानको ‘अन्तिम’ लाई कति तिरेर नेपाल ल्याइयो ?
November 25, 2021 November 25, 2021 - by chitwan online - LeaveaComment
मङ्सिर ०९, काठमाडौं । दुई वर्ष अगाडि कलाकार नीर शाहले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘काठमाडौंका युवती सलमान खानलाई रुघा लाग्दा पनि रुन्छन् ।’ उनको यो भनाईबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि नेपालमा सलमानको लोकप्रियता कति छ । उनका फिल्मले भारतमा त मात्र होइन, नेपालमा पनि करोडौं छाप्ने गरेको छ । यसैले त नेपालका वितरकहरु उनका फिल्म नेपाल भित्राउन ठूलै दौडधुप गर्छन् । सलमान खान अभिनीत नयाँ फिल्म ‘अन्तिम’ यही शुक्रवार नोभेम्बर २६ बाट प्रदर्शनमा आउँदैन । उनको फिल्म नेपालमा रिलिज नहुने त कुरै भएन ।
गोपीकृष्ण मुभिज मातहतको कम्पनी ‘ए एट फिल्मस्’ ले यो फिल्मलाई ठूलो रकम तिरेर नेपाल प्रदर्शन राइट्स लिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष निरज पौडेलले फिल्मलाई नेपाल ल्याउन एक करोड ३५ लाख तिरेको जानकारी प्राप्त छ । नेपालका १२५ वटा हलमा फिल्म रिलिज हुने कम्पनीले जनाएको छ । तिहारमा रिलिज भएको बलिउड फिल्म ‘सुर्यवंशी’ ले पनि नेपालमा सय बढी हल पाएको थियो । यो फिल्मले नेपालमा आक्रामक व्यापार गरेको देखेपछि ‘ए एट फिल्मस्’ ले उत्साहित भएर सलमानको फिल्मलाई मोटो रकम तिरेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
‘अन्तिम’ हेर्नका लागि पनि हलसम्म दर्शक पुग्ने अपेक्षा धेरैको छ । जी स्टूडियोको निर्माणमा महेश मान्जरेकरले फिल्मको निर्देशन गरेका हुन् । उनले यसअघि थुप्रै सफल मराठी फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । केही बलिउड फिल्ममा उनले सलमानसँग काम पनि गरेका छन् । फिल्ममा आयुष शर्मा र महिमा मकवानाको पनि अभिनय रहेको छ । आयुष शर्मा, सलमान खानका ज्वाईं हुन् । पहिलो पटक उनीहरुले एकसाथ फिल्ममा काम गरेका हुन् ।
Previous Article फिल्म क्षेत्रमा कलाकारको एकदमै अभाव छ : दीपेन्द्र लामा
Next Article चितवनमा एमाले महाधिवेशनको सुरक्षा कमाण्ड गर्दै एआइजी र दुई डिआइजी
About chitwan online
View all posts by chitwan online →